Waa maxay sababta aad u baahan tahay freeware DVD Creator
Content intooda badan waa digital hadda. Laga soo bilaabo aad videos qoyska cusub ku camera aad, war aad bangiga, si uu shineemada waxaad kala soo bixi toos u aad PC, waxaan dhif u baahan tahay nuqul la taaban karo ee wax dambe. Weliba, waxa dhacaya marka aad rabto inaad la wadaagto nuqul ka mid ah sawirrada qoyska la leh qoyskaaga kordhiyay? Waxaad ma ahan oo keliya iyaga siin karaan your computer. Maxaa dhacaya marka aad rabto in aad daawato filim qol oo kala duwan oo aan PC ah? Maxaa dhacaya marka aad rabto in aad dib-up of qoraallo xasaasi ah haddii ay cillad computer ah?
Waxaad u baahan tahay inaad nuqul ka mid adag. Taasi waa sida kaliya ee ay u hubiyaan in aad leedahay doonaa dib-up ee kiiska wax qaldamaan. Sure, waxaad isticmaali kartaa daruurtii - laakiin waa in si dhab ah in aad gacanta? DVD A waa u fududahay in ay dib ilaa mar alla markaad ogaato sida, waxay qaadataa ilaa yar-ka-jirin meel, waana sida wanaagsan dib-up-dhexaad ah sida aad u heli kartid, haddii aad ku kaydiso iyo u isticmaalaan si xilkasnimo leh.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan oo keliya mid fudud sida iibsashada DVD faaruq oo maalin walbo aad PC ee CD drive. Haddii aad rabto in si loo gaaro natiijo wanaagsan, ka dibna aad u baahan tahay si aad u hesho software ah in loogu badalo doona faylasha iyo qorno iyagii inay DVD aad, si aad u ogaato macluumaadka in, ay noqon filim ama dukumiinti ama sawiro, waxa lagu kaydiyaa oo la heli karo. Nasiib wanaag, ma aha in aad si loogu bixiyo software this - waxaa jira wax badan oo DVD abuure barnaamijyada freeware heli karo. Maqaalkani waxa uu ku siin doonaa liiska tobanka DVD Creator barnaamijyada sare freeware.
Qeybta 1: sare Our ​​Toban diiro Wixii DVD Creator freeware
Qeybta 2: Xulashada More ah Advanced & Professional DVD Creator freeware
Ka hor inta aanan bilaabin, waxaan kuu sheegi doonaa wax yar oo ku saabsan liiska. Waxaan ognahay in nidaamka Windows ku salaysan xisaabiyo inta badan kombiyuutarada desktop / laptop, laakiin waa inay ogaadaan in waxyaabaha Apple, oo ay ku jirto taxanaha Apple Mac, waa wax weligeed sii kordheysa ee caanka ah. Sidaas awgeed, waxaan abuurnay heystaan ​​xitaa kala jabeen on software u Mac iyo Windows. Shan ka mid ah software kuwani waa Apple oo ku salaysan, shan yihiin Windows ku salaysan. Mid ka mid ah ka shaqeeya labada, wax yar u dhicin in Microsoft raallinimadiisa, laakiin waxaa jira wax qof kasta.
Haddii aan ugu buuqaysaan oo dheeraad ah, aan ka heli on to our liiska.
1. iSkysoft DVD Creator (for Mac / Windows)
Tani waa dhan-Ujeedada DVD gubi weyn oo kuu ogolaaneysaa in aad samayn ku dhawaad ​​wax aad rabto, iyo kharash la'aan. Waxaad isticmaali kartaa ay editor dhisay-in si aad u aragto waxa aad qabanayso inta aadan in meesha gubatay joogtada ah CD.
Tani waa software fiican sababta oo ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan bedeley hortiisa ka ololaya DVD aad, oo ka duwan badan oo software kale, waxay bixisaa foomamka si aad u abuuri karaan raadinaya xirfad Tusmada bedeley.
Baro wax badan oo ku saabsan DVDStyler >>
3. Diskoo (Waayo, Mac OS X 10.4.3+)
Diskoo waa software weyn OS X oo caawisaa DVDs gubanaya. Waxa kale oo uu leeyahay muuqaalada badan oo dheeraad ah, sida animations oo fudud ah si ay u fahmaan interface user in ka dhigan tahay in aad ogaato sida loo isticmaalo oo marna waxay dareemaan cabsi.
Baro wax badan oo ku saabsan Diskoo >>
LiquidCD waa gabal runtii fudud oo dareen leh ee stoftware in la heli karo nidaamyada Mac OSX. Waxaa ka mid ah dhibcaha weyn yihiin kala duwan ee qaabab file in ay qabsan kartaa la gubi. Si kastaba ha ahaatee, waa software buggy ah - waxaana rajeyneynaa in ku dhiirigelinayaan in uu wax ka qabato si ay u qaadato barnaamijka heerka ku xiga.
5. BurnX (for Mac OS X)
Software Tani waa mid gaar ah ka mid ah software DVD abuure freeware u Mac, maxaa yeelay waxa ay leedahay awood ay ku gubi CD ama DVD ee kalfadhi oo badan. Waa maxay taasi ka dhigan tahay waa in muhiimad - halkii ay ka abuuraya kaydinta faylka joogto ah u gal DVD ah, BurnX kuu ogolaanayaa inaad masixi iyo bedelo files on DVD aad. Tani waa fiican u archiving iyo dib ilaa ujeedooyin, iyo sidoo kale marka aad u baahan tahay isbedel lagu kaydiyo.
DeVeDe waa software ugu horeysay Windows ku salaysan waxaana ku qoran. Waxa kale oo software quruxsan nifty wax yar oo samayn kara waxyaalaha ugu wada in freeware fudud oo DVD ah Abuuridda awoodaan inay sameeyaan waa in.
Qaar ka mid ah dhibcood hoos ku saabsan software, inkastoo: Marka hore, waxa ay u fiican tahay dhamaadka = users iyo celcelis ahaan user computer, si kastaba ha ahaatee waxa aan la socday si ay u caawiyaan in aad keentaa nooc kasta oo ka mid ah adeegyada xirfad leh DVD aad ee. Sidoo kale, waa kaliya la jaan qaada qoraalkii dambe ee Windows. Sidaas darteed haddii aad leedahay nidaamka waayeel ah hawlgalka, laga yaabo in aad rabto in aad si uu u hubiyo waafaqsan ka hor waxaad kala soo bixi freeware this.
Baro wax badan oo ku saabsan DeVeDe >>
VobBlanker waxoogaa ka badan oo gaar ah ee ay howlgal ka badan qaar ka mid ah abuuraha DVD kale softwareon liiskan yahay. Waxaa si gaar ah loo isticmaalo si ay ula files VOB shaqeeyaan, oo waxaa inta badan loo isticmaalaa inay dharka iska macluumaad xad-dhaaf ah in mar horeba la encoded gudahood video files. Waayo, waxa ay aad u faa'iido badan. Si kastaba ha ahaatee, ma aha isticmaalka guud ee saaxiibtinimo si la mid ah in qaar ka mid ah fursadaha aan ku qoran yihiin meelo kale.
Baro wax badan oo ku saabsan VobBlanker >>
Avi2DVD waa software ah ayaa diyaar u ah mashiinada daaqadaha oo si weyn faa'iido u ka xaqiiqda ah in uu leeyahay user interface ah oo fudud cajiib ah. Tani waxay sida weyn barnaamijka DVD abuure freeware kuwa qibrada leh ka yar. Si kastaba ha ahaatee, Deji waa ka yar sahlan, oo ma jirto xasilooni dhab ah - oo mararka qaarkood ay u shaqayso, mararka qaarna waxaad doontaa in dhibaato biqil.
Baro wax badan oo ku saabsan Avi2DVD >>
CDBurner XP waa freeware ah DVD abuure weyn - waa gaar wanaagsan haddii aad rabto in la abuuro CD-yada maqalka. Waxa ay u ogolaataa abuurka cajaladaha maqal ah oo aan sameeyo waxa gubidda si badan - tago dhimman weyn uu u dhaxeeyo tareenka.
Marka la eego hawlaha awood badan, waxa ay sidoo kale qaban karaa DVD oo loo isticmaali karaa gubanaya si aad ka - taas oo wanaagsan, nidaamka qalliinka aad taageerto kor.
Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid diidmo ah waa in uu leeyahay user CDBurnerXP interface aad u adag marka la barbar dhigo software kale ee liiska this.
Baro wax badan oo ku saabsan CDBurnerXP >>
10. DVD cirib (for Windows XP, Vista, 7, 8)
DVD cirib waa weyn yahay, maxaa yeelay waxa ay leedahay waxyaalo badan in abuura kale DVD khasab ma aha. Dhex qaababka ay ugu wanaagsan tahay awoodda ay leedahay in diinta iyo qori 45 noocyada kala duwan ee file aad disk. Sidoo kale, waxaad samayn kartaa, waa in aad rabtid in la abuuro video files, la abuuro subtitles, kuwan raadkaygay audio (on top of video) iyo menu ah si loo abuuro DVD xirfadle-style in ay fududahay in la isticmaalo iyo ka buuxaan muuqaalada.
Wondershare DVD Creator waa DVD ah si sahlan loo isticmaalo software abuuraya oo aan looga baahnayn xirfad wax ku qiro. Iyadoo la dhisay-in arrimo badan oo aad DVD Menu, waxa aad awoodi kartaa in la abuuro DVD cajiib badan abid.
Top 10 DVD Free Writer Software
Top 10 DVDFab lagu bedelan karo Beddelaan DVDs si kala duwan Qaabka Video
> Resource > DVD > Top 10 ugu fiican DVD Creator freeware